I-ITIL yeMvume yeMisebenzi Yengqesho - ITS Tech School
Ukuba nesitifiketi se-ITIL phantsi kweemikhono zakho kukunceda kakhulu kumsebenzi wakho. Akukona nje ukuphucula indlela yokwenza umsebenzi wokuba nethemba ngokuqinisekileyo ukuqinisekisile inxalenye ephezulu kunoma yimuphi umbutho. Ukuba isipho esiyinhloko kwi-resume yakho, inika ukuqonda kumphathi ozayo oza kumemeza umntu ekufundeni kwi-IT Service Management.
Icandelo ngalinye lebhizinisi kwihlabathi lequmrhu, kunye nesibonelelo esahlukileyo, siya kunika inkxaso efanelekileyo kunabo bonke abaxhamlayo. Ngokusemgangathweni luvavanyo namhlanje, lukhulu ubudlelwane, oluphakamileyo luvavanyo olujongene nayo kwiimarike kunye nokugqwesa ngakumbi ukunyanzela ukulwa nemiphumo yovavanyo ngalunye. Ihlabathi elijongene nokulindela, imibutho yabasebenzi, kuba yinto encinci okanye ininzi ekugqibeleni ihamba ngexesha elihle nelibi emarike. Ukujongana nayo nganye yobunzima kwindlela esona sisilumko ukujongana nezoshishino kukugxininisa kwimpumelelo engapheliyo, ukususela ngoku ukuphazamisa iingxaki zemingcipheko enkulu. Ukukhetha ukuxhoma i-Hangout ekhoyo yamashishini amancinci ibhekiselele kumandla amakhulu okubambisana kwamaqela amakhulu.
Kunconywa ngamaqela ahlukeneyo:
Imibutho eyahlukeneyo namhlanje ixhomekeka kwizinto ezintsha. Ukwandiswa kwe-perky yakutshanje yindlela yokwakha ye-ITIL. Iinkqubo ezithathwe emva kwesakhiwo se-ITIL zinceda umbutho ukuba unqabise isityholo sakhe esimalunga nemali. I-ITIL intsha iphelile ukuba ivelise kakhulu kubo, emva koko iphakamisa umdla kubantu be-ITIL. Uqeqesho lwe-ITIL lunikeza ulwazi oluphezulu ukuya ngasezantsi lwe-ITSM kubaviwa, okwenza ukuba baninzi bajonge emva kwentshukumo yombutho. I-ITIL ilungiselele ukusebenza kwabasebenzi ayifumanekanga nje isibophelelo esipheleleyo ngokukhawuleza kodwa ixeshanye ziqeshwe ngamalungu afanelekileyo kwishishini. Inani elikhulu lemveliso yezo shishino lonke liye laxhasa i-ITIL. Amashishini afana neBoing, i-Hewlett-Packard, i-IBM, i-Microsoft, i-Pfizer, iToyota, iWalmart, i-NASA Disneyland kunye neyona nto ininzi iyakwamukela i-ITIL. Imibutho esebenzisa i-adware ye-ITIL eqinisekisiweyo ye-lib ekwazi ukukwazi nokwanela kokubili kunye neenkqubo ezintsha zentsebenzo kunye nesiseko.
Ubungcono amathuba omsebenzi:
Uqeqesho lwe-ITIL yiyo yonke i-akhawunti njengesixhobo sokucatshulwa esicacisa indlela ezayo. Iingcali ezityalomali Uqeqesho lwe-ITIL bafumana ngaphezulu kunezo ziqinisekisiwe kwizigaba ezahlukeneyo. Inikeza ukutya okuyingxenye ephezulu kunye nokunyuka kwabasebenzi abasenkundleni yeenkonzo ze-IT. IISIqinisekiso Uphucula abacebisi be-IT kunye neengcali ze-ITSM ithuba lokuphucula ingxenye yabo kwaye ngokuqhubekayo kubonisa ukuba luncedo kwezo zinto zoshishino ezibandakanyiweyo kwimibutho ye-IT kunye neenkonzo ze-IT.
Iingcali ezibandakanyekayo kuLawulo lweeNkonzo ze-IT, uLawulo lweProjekthi, iiNkonzo zeNkonzo kunye neeNkcazo zeeNkonzo kunye neendlela zobugcisa ezixhamlayo kwi-ITIL. Ngaphandle kwezi Abafundi abaqinisekisiweyo be-ITIL banokuzama izandla njengoko baphenyo be-IT yokuthunyelwa kwee-administration, iinjineli zenkxaso, inkxaso yobugcisa kunye nooncedo lweeinjini. Uqeqesho kwi-ITIL unikezela umntu ukuba azakhele kwakhona ngokuphambili kwezinto ezintsha kunye nokumxhasa ngokukwazi ukujongana nobunzima bessimi.
An Isitifiketi se-ITIL kunceda indoda ukuba yongeze umda wokuqalisa kwakhona kwaye iphuculise iimeko zakhe zokufumana umsebenzi ophezulu. Ekubeni amaqumrhu asekhompyutheni yanamhlanje sele aqalise ukukhupha izakhiwo zawo kunye ne-ITIL ngcamango, banesidingo esikhulu I-ITIL iqinisekisiwe iingcali. Akuyona into ephazamisayo ukuthetha ukuba kungekudala kunokuba ibe yinto engaphantsi kwayo, ingadlulanga kwizicelo eziphuhliswayo zokuvuselela izinto ezintsha, Isitifiketi se-ITIL inokuphela ngokunyanzeliswayo kubantu abafuna ukwenza ikhethelo yabo kwi-IT shishini.
Lapha ibhulo ehlobene malunga Isikhokelo sesinyathelo nesinyathelo se-ITIL
I-ITIL yeSatifikethi - Isikhokelo esigqibeleleyo